Muqdisho – Ciyaaraha ciyaaraha Maamulada Dalka oo la furay. – Idil News
Muqdisho – Ciyaaraha ciyaaraha Maamulada Dalka oo la furay.
Ugu horeyn waxaa Socod wareeg ah garoonka ku maray Ciyaartoyda ka qeyb qaadanaya Tartankan, ee ka kala socda Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Koofur Galbeed iyo Gobolka Banaadir, waxaana intii uu socodka wareega socday waxaa garoonka qabsaday heeso daah fur u ahaa Tartanka.
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda cagta Soomaaliyeed C/qani Saciid Carab ayaa sheegay in Tartankan ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha dowladda Federaalka, isla markaana Xiriirka Kubadda Cagta uu dhanka Farsamada iyo maamulka kubadda cagta uu ka taageerayo.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in tartankan uu qaban qaabadiisa muddo soo socotay, iyadoo xustay in ciyaarta lagu furayo Tartankan ay dhici doonto maalinta berri oo ay isaga hor-imaan doonaan Kooxaha kubadda Cagta Gobolka Banaadir iyo Jubbaland.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay Ciyaartoyda iyo Mas’uuliyiinta ka socota Maamul goboleedyada, isagoo xusay in Tartankan uu yahay markii labaad oo la qabto.
Waxaa uu sheegay in ciyaaraha ay yihiin astaan nabadeed iyo is dhex gal bulsho, isla markaana maamulkiisa ay go’an tahay inuu dhiira geliyo ciyaaraha iyo Isboortiga qeybahiisa kala duwan.
Ugu dambeyn Wasiirka Dhalinyatada iyo isboortiga ayaa la guddoonsiiyay Koobkii ay ku guuleysatay Kooxda kubadda cagta ee Puntland, oo ay dib u soo celisay, iyadoo rajo ka qabta inay difaacato, maadaama ay sanadkii hore ku guuleysteen Tartankan.